Baxnaanin & Caafimaad (Om Habilitering & Hälsa) | Habilitering & Hälsa
Start / Language / Soomali/Somaliska / Baxnaanin & Caafimaad (Om Habilitering & Hälsa)
Baxnaaniska & Caafimaad waxay bixisaa talo, taageero iyo daryeelka caruurta iyo dadka waaaweyn eel eh hoos u dhac laxaadka ah oo joogto ah. Tani waxay noqon kartaa sida hoos u daca awooda garaadka, dhinaca ootisimka, hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa, dhego iyo indho laäaan iyo dhaawac maskaxeed oo xun. Waxaa kale oo aanu talo iyo taageero siinaa qaraabada iyo shaqaalaha ku hareersan ilmahaas ama qofkaas weyn. Baxnaaniska iyo Caafimaad waxa kale oo ay leeyihiin shaqo ah in la faafiyo aqoonta ku saabsan hoos u dhacyada laxaadka.
Baxnaaniska hawlahoodu waa inay ka hortagaan oo yareeyaan dhibaatooyinka ay hoos u dhac laxaadka ahi yeelan karto. Ujeedadu waa in la abuuro xaaladaha ugu fiican ee suurtagal ah si loo helo nolol isku filnaansho ah iyo ka qayb-qaadashada bulshada.
Waa kuwee hawluhu?
Dhinaca baxnaaniska waxa tusaale ahaan laga heli karaa taageero ah in qofku horumariyo awooda dhaq-dhaqaaqa iyo aqoonta luqada iyo wada hadalka. Qofku wuxuu tijaabin karaa waxyaabo caawiya oo si wada-jir ah ayaa qof daryeele ah loola heli karaa qaab fiican oo qofku u daryeeli karo gurigiisa iyo nolosha maalinlaha ah. Waxa kale oo aanu haynaa talo bixin ku saabsan bulshada taageeradeeda iyo adeegyadeeda kale. Hawlaha baxnaaniska bilaa kharash ayay u yihiin bukaan socodka iyo qaraabada.
Baahida bukaan socodka oo ah muhiimada
Baahida bukaan socodka iyo qiimeyn khibrad leh ayaa ah meesha laga bilaabo arrinta hawlaha la bixinayo. Hawlahani waxay ahaan karaan kuwa qofka gaar u ah ama waxay u dhici karaan koox ahaan ama koorso. Aasaas muhiim ka ah baxnaaniska waa in qofka bukaan socodka ahi uu qayb ka ahaado qorsheynta hawlihiisa. Waxa kale oo shuruud u ah hawlo badan waa inaanu wada shaqayn fiican la lahaano qaraabada qofka bukaan socodka ah iyo daryeel iyo xanaano bixiyayaasha kale.
Waaqici ku salaysan xaqiiqda
Baxnaaniska hawlahoodu waa inay ku dhisnaadaan waaqici ku salaysan xaqiiqda. Tani micnaheedu waa miisaamida waayo aragnimo la soo tijaabiyay, natiijada cilmi-baarisyo, waayo aragnimada gaarka u ah bukaan socodka iyo waxa run ahaan suurtagal ah in la fuliyo.
Xarumaha iyo xirfadaha
Baxnaaniska iyo Caafimaad waxay leedahay qiyaasti 30 xarumood – xarumaha baxnaaniska iyo rugo takhasus ah – kuwaas oo laga helayo dhamaan gobolka Stockholm. Halkani waxaa bukaan socodka ugu shaqeeya caawiyayaasha dhaqdhaqaaqa iyo tababarka xubnaha jidhka, caawiyayaasha dadka ay dhibaatadu ka haysato xagga codka iyo hadalka, dadka aqoonta u leh cilmi nafsiga, kalkaaliyayaasha caafimaad ee masaajada iyo duugniinka xubnaha jirka, dadka aqoonta u leh cilmiga bulshada iyo macalimiinta takhasuska leh.
Baxnaaniska iyo Caafimaad waxay qayb ka tahay maamulka caafimaadka ee gobolka Stockholm.
Adeegayaga su’aalaha ayaa ka jawaaba su’aalaha ku saabsan baxnaaniska, xarumahayaga iyo taageerada bulshada ee dadka leh hoos u dhac laxaadka ah.
08-123 350 10, maalmaha caadiga ah ee aan fasaxa ahayn 08.30–16.30.